Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် CNC Rotary စားပွဲတင် ထုတ်လုပ်သူနှင့် CNC Rotary စားပွဲတင် ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တည်ထောင်ခြင်းကတည်းကကျနော်တို့၏ထုတ်လုပ်သူ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့ပေါင်းစည်းတဲ့ပြည့်စုံသောအုပ်စုသို့ငယ်လေးတစ် enterprise မှဖွံ့ဖြိုးပြီးပါပြီ CNC Rotary စားပွဲတင်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုများကိုစိတ်ကျေနပ်မှုဖောက်သည်များ၏ကြီးထွားလာစာရင်းကသဘောကျလိမ့်မည်ဆိုသည်ကိုသေချာဖြစ်ကြ၏။ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ ငါတို့နှင့်အတူကြာမြင့်စွာနဲ့အောင်မြင်သောစီးပွားရေးဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှအကောင်းဆုံး CNC Rotary စားပွဲတင် နိုင်ငံတကာနယ်ပယ်တွင်အောင်မြင်မှုရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအားလုံးသည်ဖောက်သည်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပေါ့ပေါ့တန်တန်ဖောက်သည်များအားကတိမပေးပါ။ ကျနော်တို့ကတိတစ်ခုပြီးတာနဲ့ကုန်ကျစရိတ်မခွဲခြားဘဲအားလုံးထွက်သွားရမယ်။ ဖောက်သည်ကငါတို့ပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကို ဦး စားပေးပြီးဖောက်သည်များနှင့်အတူအဝေးရောက်လက်တွဲဆောင်ရွက်မှုများကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်ဖောက်သည်များအနေဖြင့်အောင်မြင်မှုအတွက်အားကိုးပြီးမှီခိုအားထားရသောရေရှည်အရေးကြီးသောမိတ်ဖက်ဖြစ်လာရန်ကြိုးစားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည်အကောင်းဆုံးသောထုတ်ကုန်များနှင့်ရောင်းချပြီးနောက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးနိုင်စွမ်းရှိကြောင်းသင့်အားအာမခံပါသည်။
ပုံစံ - GXA-255H
Worktable အချင်းØ255, Ø320, Ø400
Big spindle bore သည်ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောအစိတ်အပိုင်းများကိုထိန်းရန်နှင့်တပ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုသည်.
ဒရမ်ဘရိတ်စနစ်ဖြင့် Ultra high clamping force.
စုစည်းထားသော spindle ကို radial နှင့်-Axial bearing ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်-၌.
Worktable အချင်း: Ø၂၅၅ မီလီမီတာ
အလယ်ဘွားအချင်း: Ø140H7 မီလီမီတာ
ဖိအားထိန်းညှိခြင်း:5 MPa ပါ
N.W. (servo motor ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်သည်):၁၁၄ ကီလို
စားပွဲတင်အမြန်နှုန်း ၁ မိနစ်ဖြတ်တောက်နိုင်သော Torque-1.
စံတင်သော inertia ကို max table speed တွင်ခွင့်ပြုသည်.အများဆုံး loading inertia လိုအပ်သောအခါအမြန်နှုန်းနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ.
ကြာမြင့်ချိန်:ငွေပေးချေမှုကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်2လခန့်
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.cnclathemachine.com.tw/my/cnc-rotary-table.html
CNC Rotary စားပွဲတင် ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုဝယ်ပါ။ CNC Rotary စားပွဲတင် ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan တွင်ရှိသောစက်ရုံ
CNC Rotary စားပွဲတင်ထူးခြားချက်: Worktable အချင်းØ125, Ø170, Ø210, Ø255 သီးသန့်မူပိုင်ခွင့်ရှိသော dual pneumatic piston ဘရိတ်စနစ်. ပိုမိုမြင့်မားသောလည်ပတ်နှုန်း. မြင့်မားသောတိကျလက်ဝါးကပ်တိုင် roller တပ်ဆင်ထားသည်. dual lead worm drive ဖြင့်ကူးစက်သောဂီယာအပြည့်,ပိုမိုမြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တုံ့ပြန်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်. သတ်မှတ်ချက်: Worktable အချင်း: Ø၁၇၀ မီလီမီတာ အလယ်ဘွားအချင်း: Ø40H7 မီလီမီတာ စားပွဲအမြင့်(အလျားလိုက်):175 မီလီမီတာ အလယ်ဗဟို၏အမြင့်(ဒေါင်လိုက်):၁၃၅ မီလီမီတာT ၏အကျယ်-အထိုင်:12H7 မီလီမီတာ လမ်းညွှန်ဘလောက်အကျယ်:၁၄ မီလီမီတာ ညှပ်နည်း:Pneumatic ဖိအားထိန်းညှိခြင်း:0.55-0.၇ MPa စက်အရွယ်အစား(LxWxH):၁၀၄x၉၉x၆၈ စင်တီမီတာ N.W. (servo motor ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်သည်):၅၂ ကီလို ဆ.W.:ကီလို ၃၅၀ ငါ့မြေး&အိမ်အရောက်ပို့ပေးပါတယ်ကြာမြင့်ချိန်:ငွေပေးချေပြီးနောက် ၁ လခန့်ကုန်သွယ်ရေးသက်တမ်း:FOB,ချင်းအမျိုးသားတပ် ဦး,CIFတင်ပို့ခြင်း:ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးငွေပေးချေမှု:၄၀%တီ/T ငွေပေးချေမှု；60%ပို့ဆောင်မှုမတိုင်မီလက်ကျန်ငွေအထုပ်:စံအထုပ်